Mpampianatra mpiasam-panjakana :HANOVA PAIKADY NY MINISITERAN’NY FANABEAZAM-PIRENENA
Tsy mifandanja ny fahazoan’ireo sekolim-panjakana isam-paritra mpampianatra , ary ny olana dia ny any amin’ireo izay mila izany indrindra no tsy mahazo matetika. Tsipihina manokana amin’izany ny any amin’ny faritr’i Melaky izay zara raha ahitana …Tohiny
Vehivavy mpandraharaha ao Amoron’i Mania:HANITATRA TSENA EO AMIN’NY SEHATRA IRAISAM-PIRENENA
Hanitatra sy hitady tsena any ivelany ireo mpanao asa tanana mivondrona ao anatin’ny GFEM na ny vondron’ireo mpandraharaha vehivavy avy any Amoron’i Mania taorian’ny fahitana fiaraha-miasa amin’ireo firenena maro mpikambana eo anivon’ny Frankofonia. Azo tsapain-tanana sahady …Tohiny
Filan-kevitry ny governemanta:HANDEHA INDRAY NY HETSIKA FANOMEZANA KOPIA
Nivoaka tamin’ny filan-kevitry ny governemanta omaly 29 Novambra 2016, teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo fa nisy ny fankatoavana volavolan-dalàna mitondra ny famerenana ny fandrindrana indray ny Fdl na ny « Fond de Développement Local ». Satria efa miomana …Tohiny
Nampihantaina. Nivaly ny fangatahan’ny teo anivon’ny Antenimieran-doholona amin’ny tokony hamatsiana fitaovam-piasana ho azy ireo. Nanome sy nanolotra vola mitentina 119 tapitrisa Ar ho an’ity andrim-panjakana ity ny teo anivon’ny masoivohon’i Inde, monina sy miasa eto …Tohiny
Tsy mitsahatra manamafy ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena vahiny ny zandarimariam-pirenena. Taorian’ny nandraisan’ny jeneraly Randriamanarina Jean Christophe, sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ireo vahiny Frantsay, dia nandray ny masoivohon’i Sina miasa sy monina eto Madagasikara, Rtoa Yang ...Tohiny